Microsoft Windows 10 Home (Digital E-License Key) Online Activation ~ ICT.com.mm
Acrobat Standard 2020 Windows International English AOO License 1 UserK929,000
ADOBE Acrobat Standard 2020 Licence 1 User Win Multi LanguageK1,322,000
Windows 11 Home to Pro Upgrade for Microsoft 365 BusinessK118,000
Microsoft Office LTSC Standard ( Lifetime licenses )K1,035,000
Microsoft office 2019 Professional Plus ( Lifetime licenses )K1,498,000
HomeSoftwaresMicrosoft Windows 10 Home (Digital E-License Key) Online Activation
Auto CAD 2022 LT /1 Year SubscriptionBack to SoftwaresMicrosoft Office 2021 Home & Business English (license)
Microsoft Windows 10 Home (Digital E-License Key) Online Activation
Activate existing Windows 10 Home Upgrade your Windows 7/8 to Windows 10 Home No subscriptions – No monthly/annual fees Instant Delivery & Download – access your software license keys and download links instantly. Free... [Learn more]
Brand: MicrosoftFilter by: Operating Systems, USD
Activate existing Windows 10 Home
Upgrade your Windows 7/8 to Windows 10 Home
Windows 10 Homeသည် အလွန်ရင်းနှီးပြီး သုံးရလွယ်ကူသည်။ ကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်လို ခံစားရလိမ့်မယ်။ Start Menu သည် တိုးချဲ့ပုံစံဖြင့် ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီး Microsoft သည် သင်၏ပင်ထိုးထားသောအက်ပ်များနှင့် စိတ်ကြိုက်များကို သယ်ဆောင်လာမည်ဖြစ်သောကြောင့် ၎င်းတို့သည် အသင့်ရှိပြီး သင့်အား စောင့်မျှော်နေပါသည်။ ၎င်းသည် စတင်ပြီး လျှင်မြန်စွာ ပြန်လည်စတင်နိုင်သည်၊ သင့်ဘေးကင်းစေရန်အတွက် ကူညီပေးရန်အတွက် ပိုမိုသော built-in လုံခြုံရေးပါရှိပြီး သင်ရှိပြီးသား ဆော့ဖ်ဝဲလ်နှင့် ဟာ့ဒ်ဝဲများနှင့် အလုပ်လုပ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
Microsoft Windows 10 Home (64-bit OEM) သည် သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဝဘ်အတွေ့အကြုံကို ပေးစွမ်းရန် ဖန်တီးထားသော ဘရောက်ဆာအသစ်ဖြစ်သော Microsoft Edge ပါရှိသည်။ ဝဘ်စာမျက်နှာများပေါ်တွင် တိုက်ရိုက်မှတ်စုများရေးပါ သို့မဟုတ် စာရိုက်ပြီး အခြားသူများနှင့် မျှဝေပါ၊ အနှောင့်အယှက်ကင်းသည့် အွန်လိုင်းဆောင်းပါးများကို ဖတ်ရှုပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်စေရန် သင်အကြိုက်ဆုံးစာများကို သိမ်းဆည်းပါ။ Cortana ကို ဖွင့်ထားခြင်းဖြင့် သင်သည် သင်အသုံးပြုနေသည့် စာမျက်နှာကို ချန်မထားဘဲ — ကြိုတင်စာရင်းသွင်းမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများ ဖတ်ရှုခြင်းကဲ့သို့သော အဓိကလုပ်ဆောင်မှုများကို ချက်ချင်းဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ အက်ပ်လေးခုအထိ အလွယ်တကူ ရိုက်ယူနိုင်ပြီး ဖွင့်ထားသည့် လုပ်ဆောင်စရာအားလုံးကို မြင်ကွင်းတစ်ခုတည်းတွင် မြင်နိုင်သည်။ နေရာပိုလိုသည် သို့မဟုတ် ပရောဂျက်အလိုက် အရာများကို အုပ်စုဖွဲ့လိုသည့်အခါတွင် virtual desktop များကိုပင် ဖန်တီးနိုင်သည်။
Windows 10 is so familiar and easy to use; you'll feel like an expert. The Start Menu is back in an expanded form, plus Microsoft will bring over your pinned apps and favorites so they're ready and waiting for you. It starts up and resumes quickly, has more built-in security to help keep you safe and is designed to work with software and hardware you already have.
Microsoft Windows 10 Home (64-bit OEM) comes with Microsoft Edge, an all-new browser that's built to give youabetter web experience. Write or type notes directly on webpages and share them with others, read online articles free of distraction and save your favorite reads for later access. With Cortana enabled, you get instant access to key actions — like making reservations or reading reviews — without leaving the page you're on. Easily snap up to four apps in place and see all open tasks inasingle view. You can even create virtual desktops when you need more space or want to group things by project.
Microsoft Windows 10 64-Bit Edition: